Shirwaynaha 9aad Ee XDSHSI Iyo Qabridahar. - Cakaara News
Shirwaynaha 9aad Ee XDSHSI Iyo Qabridahar.
Qabridahar,(cakaaranews), Axad, 30, October, 2016. Waxaa labadii maalmood ee ugu danbeeyay siwayn ugu soo qul-qulaya xarunta gobolka qoraxay ee magaalada qabridahar masuuliyiinta xukuumada DDSI heerarkooda kala duwan, hogaaminta XDSHSI, ergooyinka ka qaybgalaya shirwaynaha 9aad ee XDSHSI oo ka kala socda dhamaan degmooyinka deegaanka, gobolada, maamul magaalooyinka DDSI, ergooyinka qurba joogta DDSI uga qaybgalaya shirwaynaha 9aad ee XDSHSI, wakiilada ka socda ururada ay bahwadaagta yihiin XDSHSI iyo marti sharaf lagu casuumay shirayan
Haddaba shirwaynaha 9aad ee XDSHSI ayaa ah, shiraynihii 3aad ee lagu qabto goob ka baxsan xarunta deegaanka ee jigjiga taasi oo ayaa cadaynaysa in ka dib markii ay xukuumada DDSI haatan ka arimisa ay guulo waawayn ka soo hoysan dhinacyada horumarka iyo nabadglyada taasi ayaa sal u ah in gobolada deegaanka iyo degmooyinkuba martigaliyaan shirwaynaha XDSHSI.
Magaalada qabridahar ayaa si meeqaam sare ah ugu diyaar garowday martigalinta shirwaynahan iyada oo goobta lagu qabanayo shirwaynahan 9aad tahay tuulada maraacaato oo 15KM ka xigta dhinaca bari xarunta gobolka qoraxay ee qabridahar. Hase ahaatee masuuliyiinta iyo ergooyinkan ka soo qaybgalay shirwaynahan 9aad ayaa waxaa martigalinaysa caasimada gobolka qoraxay ee qabridahar, maadaama oo ay isku dhawyihiin goobta shirka ka qobsoomayo iyo magaalada qabridahar.
Magaalada qabridahar ayaa waxaad si wayn uga dareemaysaa sida meeqaamka sare ah ee ay ugu diyaargarowday martigalinta shirkan iyada oo ay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada qabridahar siwayn u soo dhaweeyeen marigalinta shirkan.
Shirwaynahan 9aad ee XDSHSI oo maalinta barito ah ka furmaya tuulada maraacaato ayaa waxaa lagu dhagaysan doonaa warbixinta waxqabadka 2 sano ee ugu danbeeyay ee XDSHSI, warbixinta gudiga dabagalka XDSHSI iyada oo lagu soo dhisitoona hogaaminta XDSHSI
kala soco shirwaynahan 9aad ee XDSHSI shabakada wararka ee cakaaranews